March 2021 - Channel Lover
March 14, 2021 by Channel Lover
မနေ့က ကိုယ်ဝန်ဆောင် တစ်ယောက် ခေါင်းတေ့ ပြစ်သွားတယ်ဒီနေ့ ထွက်လာကြပြီ ကိုယ်ဝန်ဆောင်သပိတ် ကမ္ဘာကြီးအံ့ဩသွားအောင်ဖော်ပြပေးကြပါ။ Photo. Credit ဒီစာလေးကိုမကျော်သွားပါနဲ့ အရေးကြီးပါတယ် (ပြန်လည်မျှဝေပေးပါ) လူတိုင်းကူညီပေးလို့ရမယ့် အကူအညီလေးတစ်ခုပြောပြချင်ပါတယ်။ အရမ်းလိုအပ်နေပါတယ်။ အားလုံးပါဝင်ပေးမယ်လို့လဲ မျှော်လင့်မိပါတယ် အဲ့တာကတော့ လမ်းပေါ်က ဈေးသည်တွေကို ကူညီပေးဖို့ပါ။ ကျွန်တော်တို့ ရေရှည်တိုက်ပွဲ ဖြစ်တဲ့အတွက် ငွေကြေးအဆင်မပြေသူတွေအတွက်အခက်အခဲတွေဖြစ်လာနိုင်ပါတယ်။ အဲ့တာကြောင့် လမ်းပေါ်က ဈေးသည်တွေကိုဘယ်လိုနည်းတွေနဲ့ကူညီလို့ရမလဲဆိုတာလေးပြောပြပေးပါမယ်။ (1)ဝယ်ပါ သူတို့ရောင်းတာလေးတွေကြုံရင်ဝယ်စားပါ။ ဈေးထဲမှာ ပစ္စည်းအတိုအစလေးတွေရောင်းတာတွေ့ရင်ဝယ်ပါ။ မြင်တာနဲ့ ဘာလေးပဲဖြစ်ဖြစ် အားပေးလိုက်ပါ။ (2)လှူပါ အများကြီးစုပေါင်းမလှူနိုင်ရင်တောင် ကိုယ်ကတတ်နိင်တယ်ဆို တစ်နေ့ကို ၅၀၀/ ၁၀၀၀ လောက်လှူပေးပါ။ တစ်ချို့ကြတော့ အဲ့လိုအလကားယူရတာမျိုးမကြိုက်တဲ့သူတွေရှိပါတယ်။ ဒါဆိုသူတို့ရောင်းတာလေးအားပေးလိုက်ပါ။ (3)ပေးပါ ကိုယ့်အိမ်မှာ မုန့်လေးတွေပိုနေတာ ဖြစ်ဖြစ် အအေးတွေပိုနေတာဖြစ်ဖြစ် ပေးလို့ရပါတယ်။ တစ်အိမ်မုန့်တစ်ခုပဲပေးပါဦး သူတို့အိမ်က ကလေး … Read more
ဒါလား သူတို့ မပစ်တာ… မင်းမှမရှယ်ရင် ဘယ်မီဒီယာမှမရှယ်ဘူး… ဒီပုံတွေဟာ ကမ္ဘတည်သရွေ့ ကျန်ရှိနေမှာ ဒီလိုပုံတွေကိုမှ မင်းမရှဲရင် အာဏာရှင်တွေ တော်လှန်မနေနဲ့ ဒီမိုကရေစီကိုလဲ ဘယ်တော့မှမလိုချင်နဲ့ ဒီပုံတွေကို ကမ္ဘာပေါ်မှာရှိတဲ့ လူတိုင်းသိအောင် ရှယ်ပေးကြပါ မြန်မာပြည်ကြီး အမြန်ဆုံးအေးချမ်းပါစေ ဒီမိုကရေစီ အမြန်ဆုံး ပြန်လည်ရရှိပါစေ unicode ဒါလား သူတို့ မပဈတာ… မငျးမှမရှယျရငျ ဘယျမီဒီယာမှမရှယျဘူး… ဒီပုံတှဟော ကမ်ဘတညျသရှေ့ ကနျြရှိနမှော ဒီလိုပုံတှကေိုမှ မငျးမရှဲရငျ အာဏာရှငျတှေ တျောလှနျမနနေဲ့ ဒီမိုကရစေီကိုလဲ ဘယျတော့မှမလိုခငျြနဲ့ ဒီပုံတှကေို ကမ်ဘာပျေါမှာရှိတဲ့ လူတိုငျးသိအောငျ ရှယျပေးကွပါ မွနျမာပွညျကွီး အမွနျဆုံးအေးခမျြးပါစေ ဒီမိုကရစေီ အမွနျဆုံး ပွနျလညျရရှိပါစေ
ယနေ့ မုံရွာမြို့ရဲ့ နွေဦးတော်လှန်ရေး မုံရွာမြို့တောင်ဘက်ခြမ်းကျေးရွာများ သပိတ်စစ်ကြောင်း ယနေ့လူထောင်ချီ ဆက်လက်ချီတက်ခဲ့ကြသည်။ နည်းပညာတက္ကသိုလ်ကျောင်းသားများပါ ပူးပေါင်းပါဝင်လာသည်။ #MonywaGazette #နွေဦးတော်လှန်ရေး အရေးတော်ပုံကြီး အမြန်ဆုံးအောင်မြင်ပါစေ မြန်မာပြည်ကြီး အမြန်ဆုံး ငြိမ်းချမ်းနိုင်ပါစေ ဒီမိုကရေစီလဲ အမြန်ဆုံး ပြန်ရနိုင်ပါစေ unicode ယနေ့ မုံရှာမွို့ရဲ့ နှဦေးတျောလှနျရေး မုံရှာမွို့တောငျဘကျခွမျးကြေးရှာမြား သပိတျစဈကွောငျး ယနလေူ့ထောငျခြီ ဆကျလကျခြီတကျခဲ့ကွသညျ။ နညျးပညာတက်ကသိုလျကြောငျးသားမြားပါ ပူးပေါငျးပါဝငျလာသညျ။ #MonywaGazette #နှဦေးတျောလှနျရေး အရေးတျောပုံကွီး အမွနျဆုံးအောငျမွငျပါစေ မွနျမာပွညျကွီး အမွနျဆုံး ငွိမျးခမျြးနိုငျပါစေ ဒီမိုကရစေီလဲ အမွနျဆုံး ပွနျရနိုငျပါစေ
မန်းလေး စိန်ပန်းက ဒလံမကို ရပ်ကွက်က ဝိုင်းဖမ်း ရုပ်သံ ဒီတိုင်း ဒီမိန်းမကို ပုံလေးဘဲ တင်ပြီး မထားလိုက်ကြပါနဲ့ အသေလုပ်ပစ်ပါ။ ကလေးတွေဖွက်ပေးတဲ့အိမ်ရှင်ဗိုက်ကြီးသည်ကိုပစ်သတ်သွားတဲ့ဖြစ်စဉ်က ဒလန်မပါတဲ့ ကလေးတွေအယောက်နှစ်ဆယ်လောက်ပါသွားတယ။် ပါသွားတဲ့ကလေးတွေရိုက်ခံနေရတယ်။ မန်းလေး ၄၁-၈၉-၉၀ သာသနာပိုင်ရပ်ကွက် အားလုံးလဲသတိထားကြပါ ကိုယ့်ဘေးပါတ်ဝန်းကျင်မှာ ဒီလိုလူမာတွေကို ဂရုစိုက်ကြပါ အရမ်းကြောက်ဖို့ကောင်းပါတယ် မသင်္ကာတဲ့သူတွေ့ရင် ၀ိုင်းဝန်း သတိပေးကြပါ… မြန်မာပြည်ကြီး အမြန်ဆုံး ငြိမ်းချမ်းနိုင်ပါစေ အားလုံးသိအောင်လဲ ရှယ်ပေးကြပါ ရုပ်သံကို အောက်ဆုံးတွင် ဖော်ပြထားပါသည်…။ unicode မနျးလေး စိနျပနျးက ဒလံမကို ရပျကှကျက ဝိုငျးဖမျး ရုပျသံ ဒီတိုငျး ဒီမိနျးမကို ပုံလေးဘဲ တငျပွီး မထားလိုကျကွပါနဲ့ အသလေုပျပဈပါ။ ကလေးတှဖှေကျပေးတဲ့အိမျရှငျဗိုကျကွီးသညျကိုပဈသတျသှားတဲ့ဖွဈစဉျက ဒလနျမပါတဲ့ ကလေးတှအေယောကျနှဈဆယျလောကျပါသှားတယ။ျ ပါသှားတဲ့ကလေးတှရေိုကျခံနရေတယျ။ မနျးလေး ၄၁-၈၉-၉၀ သာသနာပိုငျရပျကှကျ … Read more
လှည်းတန်းမှာဆန္ဒပြရင်းဖမ်းခံလိုက်ရတဲ့ ကောင်မလေးပါ (ရှယ်ပေးကြပါအူး)
လှည်းတန်းမှာဆန္ဒပြရင်းဖမ်းခံလိုက်ရတဲ့ ကောင်မလေးပါ (ရှယ်ပေးကြပါအူး) သူ့မိဘတွေကလည်းမြန်မာမှာမရှိပါဘူးတဲ့ ငယ်ငယ်ထဲကကွဲပြီးအဖွားဖြစ်သူနဲ့နေနေရတာပါ သူ့အဖွားဖြစ်သူက နေ့စဉ် ငိုနေရပါတယ် 3ရက်နေ့ထဲကဖမ်းခံရတာခုထိမလွတ်သေးပါဘူး ကူညီနိုင်မယ့်နည်းလမ်းများနှင့် ကူညီမယ့်သူများရှိခဲ့လျှင် ညီမက်ိုဆက်သွယ်ပေးပါရှင် သူအဖွားဖြစ်သူက အင်တာနက်ကအစမသုံးတက် တော့နေ့စဉ်သူ့မြေးလေးအကြောင်းပဲပြောပြီး ကိုယ့်ရှေ့မှာလာငိုနေတာမခံစားနိုင်တော့ပါဘူး မိန်းခလေးဖြစ်တဲ့အပြင်အရမ်းနဲ့ငယ်သေးတဲ့ခလေးမို့ ညီမလို့မျက်ကွယ်ပြုထားလို့မရပါဘူးရှင် အတက်နိုင်ဆုံးမြန်မြနလေး ကယ်ထုပ်ပေးချင်လို့ပါ ရှေ့နေငှားရမယ်ဆိုရင်လည်း ညီမကိုယ်တိုင်ငှားပါ့မယ် ကလေးပြန်ရဖို့ကအဓိကပါ ဆက်သွယ်ပေးရန်ဖုန်းနံပါတ် – 09266885240 0978744370 unicode လှညျးတနျးမှာဆန်ဒပွရငျးဖမျးခံလိုကျရတဲ့ ကောငျမလေးပါ (ရှယျပေးကွပါအူး) သူ့မိဘတှကေလညျးမွနျမာမှာမရှိပါဘူးတဲ့ ငယျငယျထဲကကှဲပွီးအဖှားဖွဈသူနဲ့နနေရေတာပါ သူ့အဖှားဖွဈသူက နစေ့ဉျ ငိုနရေပါတယျ 3ရကျနထေဲ့ကဖမျးခံရတာခုထိမလှတျသေးပါဘူး ကူညီနိုငျမယျ့နညျးလမျးမြားနှငျ့ ကူညီမယျ့သူမြားရှိခဲ့လြှငျ ညီမကျိုဆကျသှယျပေးပါရှငျ သူအဖှားဖွဈသူက အငျတာနကျကအစမသုံးတကျ တော့နစေ့ဉျသူ့မွေးလေးအကွောငျးပဲပွောပွီး ကိုယျ့ရှမှေ့ာလာငိုနတောမခံစားနိုငျတော့ပါဘူး မိနျးခလေးဖွဈတဲ့အပွငျအရမျးနဲ့ငယျသေးတဲ့ခလေးမို့ ညီမလို့မကျြကှယျပွုထားလို့မရပါဘူးရှငျ အတကျနိုငျဆုံးမွနျမွနလေး ကယျထုပျပေးခငျြလို့ပါ ရှနေ့ငှေားရမယျဆိုရငျလညျး ညီမကိုယျတိုငျငှားပါ့မယျ ကလေးပွနျရဖို့ကအဓိကပါ ဆကျသှယျပေးရနျဖုနျးနံပါတျ – 09266885240 0978744370
ထူးဆန်းတဲ့ KBZ ကလင်ဒါ…(ကျက်သီးထလောက်အောင် တိုက်ဆိုင်လွန်းပါတယ်)
ထူးဆန်းတဲ့ KBZ ကလင်ဒါ…(ကျက်သီးထလောက်အောင် တိုက်ဆိုင်လွန်းပါတယ်) သူများပြောစကားနဲ့ လမ်းမဆုံးတတ်တဲ့ ကျမကတော့ မရရအောင်ရှာပြီး အတည်ပြုထားလိုက်တယ်… ပုံတွေဟာ ကျက်သီးထလောက်အောင် တိုက်ဆိုင်လွန်းပါတယ်…ရေးဆွဲထားတဲ့ ပန်းချီဆရာ တစ်ယောက်စီတိုင်းရဲ့ စိတ်ကူးတွေ အိပ်မက်တွေဟာ ဘယ်လိုပုံစံ ဖော်ဆောင် ထားသလည်း မသိရပေမယ့် ကြည့်ပြီး အဓိပ္ပာယ်များစွာနဲ့ စဉ်းစားရတဲ့ ပုံတွေကြီးပါပဲ… ကိုယ်ဖော်ဆောင်ချင်တဲ့အတိုင်း ဖော်ဆောင်ရရင်… #ကလင်ဒါကိုပုံဖော်ပြီးပျော်နေသောမိမိ😚 ဒါက ကလင်ဒါရဲ့ အဖုံးပါ… အတွင်းမှာ စစချင်းမြင်ရတဲ့ပုံ (၁)လပိုင်း နိုင်ငံတော်ဟာ သာယာဝပြောနေတယ် …အေးဆေးတယ် တည်ငြိမ်တယ်… (၂)လပိုင်း စာတွေအများကြီးရေးထားတယ်…မှုန်တီမှုန်ဝါးနဲ့ ရေးထားတဲ့စာမှာ မြန်မာပြည်အလယ်ပိုင်းဆိုတာ မြင်ရသလို ရန်ကုန်မှာရှိတဲ့ လူသန်းပေါင်းများစွာ ဆိုတဲ့စကားစုကို မြင်ရတယ်… ပြီးတော့ လုံခြုံရေးခါးပတ် လုံခြုံရေးဦးထုပ် လုံခြုံရေးဖိနပ် စီးဖို့ တိုက်တွန်းထားပြန်တယ်…”တစ်မူး တစ်ပဲ အမြဲလွဲ” ဆိုတဲ့စာရော … Read more
ဒီစာလေးကိုမကျော်သွားပါနဲ့ အရေးကြီးပါတယ် (ပြန်လည်မျှဝေပေးပါ)
March 13, 2021 by Channel Lover
ဒီစာလေးကိုမကျော်သွားပါနဲ့ အရေးကြီးပါတယ် (ပြန်လည်မျှဝေပေးပါ) လူတိုင်းကူညီပေးလို့ရမယ့် အကူအညီလေးတစ်ခုပြောပြချင်ပါတယ်။ အရမ်းလိုအပ်နေပါတယ်။ အားလုံးပါဝင်ပေးမယ်လို့လဲ မျှော်လင့်မိပါတယ် အဲ့တာကတော့ လမ်းပေါ်က ဈေးသည်တွေကို ကူညီပေးဖို့ပါ။ ကျွန်တော်တို့ ရေရှည်တိုက်ပွဲ ဖြစ်တဲ့အတွက် ငွေကြေးအဆင်မပြေသူတွေအတွက်အခက်အခဲတွေဖြစ်လာနိုင်ပါတယ်။ အဲ့တာကြောင့် လမ်းပေါ်က ဈေးသည်တွေကိုဘယ်လိုနည်းတွေနဲ့ကူညီလို့ရမလဲဆိုတာလေးပြောပြပေးပါမယ်။ (1)ဝယ်ပါ သူတို့ရောင်းတာလေးတွေကြုံရင်ဝယ်စားပါ။ ဈေးထဲမှာ ပစ္စည်းအတိုအစလေးတွေရောင်းတာတွေ့ရင်ဝယ်ပါ။ မြင်တာနဲ့ ဘာလေးပဲဖြစ်ဖြစ် အားပေးလိုက်ပါ။ (2)လှူပါ အများကြီးစုပေါင်းမလှူနိုင်ရင်တောင် ကိုယ်ကတတ်နိင်တယ်ဆို တစ်နေ့ကို ၅၀၀/ ၁၀၀၀ လောက်လှူပေးပါ။ တစ်ချို့ကြတော့ အဲ့လိုအလကားယူရတာမျိုးမကြိုက်တဲ့သူတွေရှိပါတယ်။ ဒါဆိုသူတို့ရောင်းတာလေးအားပေးလိုက်ပါ။ (3)ပေးပါ ကိုယ့်အိမ်မှာ မုန့်လေးတွေပိုနေတာ ဖြစ်ဖြစ် အအေးတွေပိုနေတာဖြစ်ဖြစ် ပေးလို့ရပါတယ်။ တစ်အိမ်မုန့်တစ်ခုပဲပေးပါဦး သူတို့အိမ်က ကလေး တွေအတွက် ဗိုက်ပြည့်စေမှာပါ။ အချင်းချင်းအဲ့လိုနည်းလမ်းလေးတွေနဲ့ဂရုစိုက်ပေးပါ။ ကျွန်တော်တို့နိုင်ငံက အောက်ခြေလူတန်းစား များပါတယ်။ ဒါအပွင့်လင်းဆုံးပြောတာပါ။ ကူညီပေးပါ။ သူတို့ရောင်းတာလေးတွေအားပေးပါ။ အဓိကတော့ … Read more
ဒိုင်းကာသူရဲကောင်း ချစ်မင်းသူအတွက် မေပန်းချီရဲ့အလှူ
ဒိုင်းကာသူရဲကောင်း ချစ်မင်းသူအတွက် မေပန်းချီရဲ့အလှူ တော်လှန်ရေးမှာ ကျဆုံးသွားတဲ့ ဒိုင်းကာသူရဲကောင်း ချစ်မင်းသူအတွက် အလှူငွေ သိန်း (၂၀)ကျော် သွားရောက်လှူဒါန်းခဲ့တဲ့ မေပန်းချီ ဒီနေ့ သူရဲကောင်း မောင်ချစ်မင်းသူအား အလှူငွေ (၂၀)သိန်းနဲ့ (၄၀၀၀၀) ကိုသွားရောက်လှူဒါန်းခဲ့ပါသည်🙏🏼🙏🏼🙏🏼🙏🏼🙏🏼 ပါဝင်လှူဒါန်းတဲ့အလှူရှင်အားလုံး ကျန်းမာချမ်းသာပါစေ မြန်မာနိုင်ငံကြီး အမြန်ဆုံး ငြိမ်းချမ်းပါစေ ဒီလိုမျိုး သေဆုံးမှုတွေ နောက်ထပ်မဖြစ်ပါစေနဲ့လို့ ဆုတောင်းပါရစေ unicode ဒိုငျးကာသူရဲကောငျး ခဈြမငျးသူအတှကျ မပေနျးခြီရဲ့အလှူ တျောလှနျရေးမှာ ကဆြုံးသှားတဲ့ ဒိုငျးကာသူရဲကောငျး ခဈြမငျးသူအတှကျ အလှူငှေ သိနျး (၂၀)ကြျော သှားရောကျလှူဒါနျးခဲ့တဲ့ မပေနျးခြီ ဒီနေ့ သူရဲကောငျး မောငျခဈြမငျးသူအား အလှူငှေ (၂၀)သိနျးနဲ့ (၄၀၀၀၀) ကိုသှားရောကျလှူဒါနျးခဲ့ပါသညျ🙏🏼🙏🏼🙏🏼🙏🏼🙏🏼 ပါဝငျလှူဒါနျးတဲ့အလှူရှငျအားလုံး ကနျြးမာခမျြးသာပါစေ မွနျမာနိုငျငံကွီး အမွနျဆုံး ငွိမျးခမျြးပါစေ ဒီလိုမြိုး သဆေုံးမှုတှေ … Read more
မနက် ၂း၄၅ အချိန်မှာ လူငယ်(၁၁)ယောက်ကို အကြောင်းမဲ့ ဖမ်းဆီးခေါ်ဆောင်သွား
မနက် ၂း၄၅ အချိန်မှာ လူငယ်(၁၁)ယောက်ကို အကြောင်းမဲ့ ဖမ်းဆီးခေါ်ဆောင်သွား ဒီနေ့မနက် ၂:၄၅ မှာ Ahlone Car Service & Spa ကို အကြောင်းမဲ့ ဝင်ရောက်ဖျက်ဆီးပြီး ဆိုင်က ဝန်ထမ်း ကလေး ၁၁ ယောက်ကို ဖမ်းခေါ်သွားပါတယ်. ပျက်စီးဆုံးရှုံးမှုတွေ ခဏဘေးချိတ်ပြီး လူတစ်ယောက်ချင်းစီရဲ့ အသက်ကို ကျွန်မတို့တန်ဖိုးထားပါတယ် အခုချိန်ထိ ဒီကလေးတွေကို ဘယ်နေရာခေါ်သွားလဲဆိုတာ စုံစမ်းနေဆဲပါ. သူတို့လေးတွေက တောရွာတွေကနေ မြို့ပေါ်တက်ပြီး မိဘလုပ်ကျွေးနေကြတဲ့သူတွေနဲ့ မိဘမဲ့ဘုန်းကြီးကျောင်းသားလေး တွေပါ. ၁၈နှစ်အောက်ကလေးတွေပါနေလို့ တကယ်လို့များ သူတို့လေးတွေကို ညအချိန်မတော် လမ်းပေါ်မှာ ပစ်ချထားခဲ့ရင် ဒလံဆိုပြီး ရပ်ကွက်က ရိုက်မှာစိုးရိမ်ရပါတယ်. ရွာကရိုးသားတဲ့ကလေးတွေဆိုတော့ ရေရေလည်လည် လည်းပြန်ဖြေတတ်မှာ မဟုတ်ပါဘူး. အဲ့ဒါကြောင့် သူတို့လေးတွေရဲ့ နာမည်, အသက်, … Read more